December 2021 – " कञ्चनजंगा News "
पर्यटन वोर्डका सिइओ रेग्मीलाई मन्त्री आलेले साँडे भनेपछि…
No Comments on पर्यटन वोर्डका सिइओ रेग्मीलाई मन्त्री आलेले साँडे भनेपछि…
काठमाडौ । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री प्रेमबहादुर आलेले आफ्नो इमान बेचेर मन्त्रीको कुर्सीमा नबस्ने बताएका छन्। शुक्रबार नेपाल पर्यटन बोर्डको २३ औं वार्षिकोत्सवका अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा मन्त्री आलेले हाल छानबिनका क्रममा रहेका बोर्डका सीईओ धनञ्जय रेग्मीले टोयोटाका गाडी बेचेर आफ्नो इमान किन्न खोजेको भन्दै आ क्रो श व्यक्त गरे।
आफूलाई खरिद गर्छु भनेर नसोच्न सिइओ रेग्मीलाई मन्त्री आलेले चेतावनीसमेत दिए। ‘उसले चार वटा टोयोटा गाडी बेचेर प्रेम आलेलाई खरिद गर्छु भन्ने नसोचे हुन्छ। इमान बेचेर म यो कुर्सीमा बस्ने वाला छैन,’ उनले भने, ‘विगतदेखि नै यस्तै थियो हजुर भन्छन्। विगतमा का ले का ले मिलेर भाले खाए होलान, तर अब आयो प्रेम आले।’
मन्त्री आलेले सीईओ रेग्मीकै कारण बेलायतमा भएको विश्व पर्यटन मेलामा नेपालको बे इ ज्जत भएको टिप्पणी गरे । उनले सिइओ रेग्मीलाई साँडेको संज्ञा दिए ।
मन्त्री आलेले भने, ‘अब यहाँ साँढेहरुलाई ल्याएर राजनीतिक नियुक्ति दिइन्छ। अब त्यो साँढे कस्ते हुन्छ भन्दा हुँहुँहुँ गरेर आउँछ। त्यहाँ बुढापाका, बालबालिकाहरु आउनुभएको छ। त्यतिबेला बधाई दिन आउनुभएको छ। अनि मन्त्रीसँग मेरो क्लाइमेक्स मिल्दैन। क्लाइमेक्स मिल्न त मैले जाँ ड खाने हुनुपर्छ।
यहाँबाट म लण्डनको प्रोग्राममा गएँ। म जाँदै जाँदिन भन्दा जाउँ हजुर भने। त्यहाँ त आफ्नो देशको बारेमा कुरा राख्नुपर्छ भनेर ज ब र जस्ती गरेर लगे। त्यहाँ गएपछि मैले मेरो देशको लागि कोभिडबाट थला परेको देश, हस्पिटालिटीमा लागेका साथीहरुसहित विभिन्न साथीहरु, हाम्रो देश सेभ जोनमा छ । भनेर सबैलाई आह्वान गर्ने इच्छा थियो। त्यो फोरममा बोल्ने इच्छा थियो। तर त्यो साँढेले केही पनि छैन, बोल्ने कार्यक्रम मन्त्रीज्यू भन्छ। त्यहाँ जान्छु १७ देश जतिका मन्त्रीहरु राउण्ड टेबलमा बसेर आफ्नो देशको विषयमा टुरिजमको विषयमा कुरा राख्छन्।
म आउट अफ रिङ छु। एउटा देशको मन्त्री यहाँबाट लण्डन गएँ, दूतावासमा राखिदियो। लण्डनमा जाँदा टिकट कति लाग्छ अब म हेर्दै बसौँ त ? त्यो त व्यवस्थापनले गर्ने कुरा हो। अन्तिममा त्यो फोरममा मैले बोल्न पाइनँ । मलाई एकदमै इरिटेड भयो। अब यस्तो साँढेलाई सीईओ हामीले बनायौँ भने संस्था चल्छ ? ’
मन्त्रीले आलेले थपे, ‘जाउँ हिँड्नुस् र क्सी खान भने। त्यस्तो साँढेलाई ल्याएर सीईओ बनाएपछि संस्था चल्छ ? म त दुःखका साथ भन्छु, लण्डनमा हुँदा कार्यक्रममा डेढ घण्टा म उभिएँ, सबैले स्या म्पे न खाइरहेका छन् म नखाने मान्छे साइडमा उभिरहेँ। हाम्रो त्यो साँढेले पनि भटाभट लगाइरहेको छ। आफ्नै आँखाले देखिरहेको छु, मलाई खा भन्छ। उसले पहिलाको मन्त्री जस्तो ठान्यो होला प्रेम आलेलाई। ४ वटा गाडी बेचेर प्रेम आलेलाई त्यो इमान म खरिद्छु भनेर त्यसले सोच्यो होला। त्यो सपनामा पनि नसोचे हुन्छ। इमान बेचेर म यो चियरमा बस्नेवाला छैन।’
मन्त्री आलेले डब्लूटिएमको कार्यक्रममा जाँदा बोर्डबाट ८० लाख खर्च भएको भन्ने सुनेको भन्दै त्यसको छानबिन गर्न माग गरे। उनले सबै खाने खर्च आफूले व्यहोरेकाले खर्चको बारेमा छानबिन गरेर कारबाही गर्नुपर्ने बताए। मन्त्री आलेले आफ्नो संस्थाप्रति उत्तरदायी भएर काम गर्न सबै कर्मचारीहरुलाई निर्देशनसमेत दिए।
यी हुन् प्रेमिकालाई बिर्सेर पनि भन्न नहुने कुरा, नभए तुरुन्तै टुट्न सक्छ सम्बन्ध
No Comments on यी हुन् प्रेमिकालाई बिर्सेर पनि भन्न नहुने कुरा, नभए तुरुन्तै टुट्न सक्छ सम्बन्ध
लभ, रिलेशन, डेटिङ – यी सबैको हरेकको जीवनमा निकै महत्व हुन्छ । कुनै जोडी सम्बन्धमा आएपछि प्रेमिल समयलाई निकै सुन्दर तरिकाले बाँच्ने गर्दछन्। फोनमा कुरा गर्नु, च्याट गर्नु, सँगै घुम्नु, एक अर्कासँग समय बिताउनु, डेटमा जानु, यस्ता थुप्रै कुरा हुन् जसका कारण तपाईंको सम्बन्ध बलियो हुन्छ ।
हरेक व्यक्तिमा कमी हुन्छ । यसमा कुनै नौलो कुरा होइन कि तपाईंका साथै, तपाईंकी प्रेमिकामा पनि केही कमी हुनेछ । तर तपाईं बारम्बार ती कमीबारे कुरा गरिरहनुहुन्छ भने निश्चित रुपमा उनी दुःखी हुनेछिन् । तपाईंको नजिकको व्यक्तिलाई प्रेमले सम्झाउनु अलग कुरा हो र बारम्बार एउटै कुरामा टोकिरहनु अर्को कुरा हो । यदि तपाईं पनि यस्तो गर्नुहुन्छ भने तपाईंकी प्रेमिकाले सहन सक्दिनन् र उनलाई लाग्छ कि उनी तपाईंको लायक छैनन् । यसैकारण सम्बन्ध तोडिन पनि सक्छ ।
काठमाडौमा २० घण्टा सम्म किन अँध्यारै भयो ? कुलमानले दिए यस्तो जवाफ
No Comments on काठमाडौमा २० घण्टा सम्म किन अँध्यारै भयो ? कुलमानले दिए यस्तो जवाफ
काठमाडौ । काठमाडौ उपत्यकाका केही स्थानमा जाडो महिना सुरु भए यता लगातार विजुली जाने गरेको छ । नेपाल विद्युत प्राधिकरणले जानकारी नदिएरै विजुली का ट् न थालेपछि स्थानिय हैरान भएका छन् । कोटेश्वर लगायतका केही स्थानमा २० घण्टा सम्म पनि अँध्यारो भएको छ । यस वारेमा जानकारी दिन नेपाल विद्युत प्राधिकरणले शुक्रवार पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरेको छ । कार्यक्रममा प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले काठमाडौं उपत्यकामा आफूहरूले अपेक्षा गरेभन्दा बढी बिजुलीको माग आएको बताएका छन्।
माग बढेपछि काठमाडौंको वितरण प्रणालीमा केही ठाउँमा समस्या भएकाले विजुली गएको बताए । उनका अनुसार काठमाडौंमा अहिले पिक आवरमा झन्डै ५ सय मेगावाट बिजुलीको माग छ। जुन पोहोर सालको भन्दा ८० मेगावाट बढी हो।
‘माग बढेपछि हाम्रा फिडर लाइन र ट्रान्सफर्मरहरू ओभरलोडेड भएका कारण समस्या भएको उनले बताए । काठमाडौमा भएका ३८ सय ट्रान्फरमर मध्य ६० वटामा समस्या आएको उनले बताए । उपत्यकामा अहिले धेरैजसो ट्रान्सफर्मर २०० केभिएका छन्। लोड बढेपछि उक्त ठाउँमा ३ सय केभिएको ट्रान्सफर्मर राखिन्छ। ३ सय केभिएकोले पनि पुगेन भने अर्को ट्रान्सफर्मर थप्नुपर्छ,’ घिसिङले भने,‘स्थानीयले आफ्नो घरनजिक राख्न दिँदैनन्। त्यसले समस्या भएको छ।’
उनले काठमाडौंका केही ठाउँमा बिजुलीको माग आफूहरूले अपेक्षा गरेभन्दा बढी भएको बताए। ‘तपाईंहरू धेरै बिजुली नबाल्नुस् म भन्दिनँ। माग बढ्नु हाम्रा लागि धेरै राम्रो कुरा हो,’ घिसिङले भने। उनले विगत दुई(तीन दिनमा काठमाडौं उपत्यकाका विद्युत वितरण नियमित गर्न नसकेकोमा क्षमा पनि मागे।
‘यो समस्यलाई हामीले अवसरका रूपमा पनि लिएका छौं,’ घिसिङले भने,‘यसले हामीलाई कस्ता पूर्वाधार बनाउनुपर्छ भने शिक्षा दिएको छ।’ यसअघि पनि काठमाडौं उपत्यकामा २ हजार बढी मेगावाटको आपूर्ति धान्ने गरी संरचना बनाउने काम भइरहेको उनले बताए।
No Comments on फेसबुकमा लभ परेको युवतीसंग पहिलो भेटमै यति ठूलो बवाल
फेसबुक अहिलेको चल्तीको सामाजिक सञ्जाल हो । यहाँ धेरैको प्रेम हुन्छ भने कतिको फेसबुकबाटै बिछोड पनि भएको पाइन्छ । तर एक यस्तो घटना बाहिर आएको छ । जुन मानिसहरुले थाहा पाएपछि यस्तो पनि हुन्छ ररु भन्दै अचम्ममा पर्छन् ।
एक जोडी फेसबुकमा कुराकानी गर्दै गर्दा एक अर्काको प्रेममा परे । लगातार कुराकानी भएको थियो । केटा केटी दुबैले सँगै बाँच्ने र म र्ने वाचा गरे । जब ती दुवैले एक अर्कालाई भेट्न बोलाए । जब ती दुबै रेस्टुरेन्टमा आमने सामने भए, तिनीहरू पहिले त थररर काँ पे । अनि ब वा ल सुरु भयो । घटना यति बढ्यो कि स्थानीय भद्र भलाद्मी बसेर कुरो मिलाउनु पर्यो ।
यो घटना भारतको हो । जानकारीका अनुसार उक्त मामला कानपुर नौगवान सादत क्षेत्रको गाउँको हो । घनौरा रोडमा अवस्थित ती फेसबुके प्रेमी सरकारी विद्यालयमा शिक्षक हुन् । दुई वर्ष अघि उनको नजिकैको गाउँको केटीसँग बिहे भयो । ती दुबैको बच्चा छैन । दुबै पतिपत्नी पनि फेसबुक चलाउँछन्, उनीहरूले फेसबुकमा नक्कली नाममा आईडी बनाएका थिए । यो संयोग थियो कि ती दुबै एक अर्काको साथी पनि भए । आफूलाई अविवाहित घोषणा गर्दै उनीहरुले विवाह गर्न र बाँच्न र सँगै म र्ने वाचा पनि गरे ।
जब प्रेमी बनेका श्रीमानले आफ्नी प्रेमिका अर्थात पत्नीमा भेटौं भन्दै कर गर्न थाले त्यसपछि उनी आफ्नो प्रेमीलाई भेट्न अमरोहा आइपुगिन् । बिजनौर रोडमा रहेको रेस्टुरेन्टमा यहाँ भेट्ने निर्णय भयो । दिउँसो दुबै आमनेसामने भए पछि, तिनीहरू पहिले त झण्डै बे हो स भए । श्रीमान्‌ले रेष्टुरेन्टमा नै हं गा मा सिर्जना गरे ।
यद्यपि त्यसबेला उपस्थित व्यक्तिहरूले उक्त मामला शान्त गरे र पतिलाई घर पठाए र केटीका माइती पक्षका परिवारका सदस्यहरूलाई बोलाए । पछि गाउँमा पञ्चायतले यसबारे छलफल गर्‍यो । यो कुरा अघि नबढाउने गरि समाप्त गरिएको छ । अहिले पति पत्नि मिलेरै बसेका छन् । यो विषय क्षेत्रमा छलफलको विषय बनेको छ। प्रतीकात्मक तस्वीर
जंगलमा छटपटाएको भिडियो टिकटक राख्ने दीदी पहिलो पटक मिडियामा बल्ल खुल्यो बास्तबिकता (भिडियो हेर्नुहोस्)
No Comments on जंगलमा छटपटाएको भिडियो टिकटक राख्ने दीदी पहिलो पटक मिडियामा बल्ल खुल्यो बास्तबिकता (भिडियो हेर्नुहोस्)
उक्त व्यक्ति जस्ले भिडियो बनाएर सामाजिक संजालमा हालेकि थिइन त्यश भिडियो निर्माण गर्दै गर्दा भिडियो पिछाडि हासेको र डोज नपुगेको भन्दै मृ त्युसग लडिरहेकि कमलाको खिल्लि उडाएपछि उनको चौतर्फि बिरोध र आलोचना भएसगै कमलाको मृ त्यु अझै झनझन रहस्यमय भएको परिवार बताउँछन् ।
परिवार भन्छ आफुलाई आफ्नो छोरिको मृ त्यु स्विकार नभएको र सम्बन्धित निकायबाट तुरुन्तै छानबिन गरि दोषि उपर कार्वाहि र पिडित परिवारमाथि न्याय दिइनुपर्ने माग गर्दछ । कमलाको साथबाट झोला ,मोबाइल र डायरि बरामत भएको छ । उक्त बरामद मोबाइलकामा कतारबाट फोन आएको प्रत्यक्षदर्शी बताउँछन् ।प्रत्यक्षदर्शी बताउँछन् कि उनिले आफुलाई के भएको नबताएको र निको भएपछि मात्रै बताउने भनेपछि आफुहरुले पनि मद्दत गर्न नसकेको तर पानी फ्रुटिहरु भने ख्वाएको उनिहरु बताउँछन् ।हेर्नुस् थप भिडियो सामाग्री
No Comments on त्यसपछि मैले उसलाई ना ङ्गो फोटो पठाएकी थिए …
साभार – ईताजा खबर
माओवादी महाधिवेशनमा भयो यस्तो हाँसो लाग्दो घटना!
No Comments on माओवादी महाधिवेशनमा भयो यस्तो हाँसो लाग्दो घटना!
काठमाडौ । नेकपा माओवादीको जारी आठौं महाधिवेशनस्थलमा एउटा अनौठो घटना भएको छ । त्यती धेरै नेता र कार्यकर्ता भएको महाधिवेशनबाट ल्यापटप र प्रिन्टर चोरी भएको ।
पत्रकारहरुले महाधिवेशनको समाचार प्रसारणमा सहयोग पुर्याउन प्रयोग गरेको सामान चोरी भएपछि प्रवेशमा कडाइ गरिएको छ । कमलादीस्थित प्रज्ञा भवनमा जारी महाधिवेशनको मिडिया सेन्टरमा राखिएको ल्यापटप र प्रिन्टर चोरी भएको प्रचार विभाग प्रमुख गोविन्द आचार्यले जानकारी दिए ।
उनका अनुसार मिडिया सेन्टरबाट ल्यापटप र प्रिन्टर चोरी भएकाले प्रवेशमा कडाइ गरिएको छ । फोटो पत्रकारबाहेकका पत्रकारलाईसमेत प्रवेशमा कडाइ गरिएको छ । प्रेस संयोजक आचार्यका अनुसार साँझ ५ बजेमात्र मिडिया सेन्टरमा प्रवेश दिने आचार्यको भनाइ ।
महाधिवेशनस्थलमा सीसीटिभी भए पनि बन्द रहेकाले चोरी भएको हुनसक्ने बताइएको छ । घटना पछि भने र शुक्रबारबाट सीसीटीभी पनि खोलिएको छ ।
यो पनि -रवीन्द्र मिश्रलाई पार्टी एकताको प्रस्ताव लिएर घरमै पुगे राजेन्द्र लिङ्देन, मिश्रले दिए यस्तो जवाफ
काठमाडौ । विवेकशिल साझा पार्टीका अध्यक्ष रविन्द्र मिश्र राजतन्त्र प्रति सकारात्मक छन् । उनले ल्याएको राजनीतिक प्रतिवेदनका कारण अहिले विवेकशिल साझा विभाजन भएको छ । धेरै प्रभावशाली नेताहरुले पार्टी छोडेका छन् । राजतन्त्र र धर्म निरपेक्षता विरुद्धको नारा बोकेको राप्रपा भने उनको त्यो राजनीतिक प्रस्ताववाट प्रभावित भएको छ ।
त्यसैले अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देन र विवेकशील साझा पार्टीका अध्यक्ष रवीन्द्र मिश्रसंग पार्टी एकता गर्न चाहन्छन् । लिङ्देन शुक्रवार एकताको प्रस्ताव लिएर मिश्रलाई भेट्न पुगेका छन् । लिङ्देनसंग राप्रपाका महामन्त्री धवल शमसेर राणा पनि थिए । अध्यक्ष लिङ्देन महामन्त्री डा धवलशमशेर राणा समेतलाई साथमा लिएर मिश्रलाई भेट्न शुक्रबार बिहान उनकै निवासमा पुगेका हुन् ।
राप्रपाले मिश्रको राजनीतिक विचारलाई समान विचार मानेको छ । भेटपछि प्रतिकृया दिँदै महामन्त्री राणाले भने ‘समान विचारधारा भएकाहरूसँग एकता गर्ने पार्टीको नीतिअनुसार भेटघाट भएको हो’, छलफलको सुरुवात भएको छ, निकट भविष्यमा पक्कै पनि सकारात्मक दिशातिर हामी पुग्ने आशा गरौँ ।’
लिङ्देनले मिश्रलाई पार्टी एकता गरेर अघि बढ्न प्रस्ताव गरेका छन् । अहिले एकताका लागि छलफल प्रारम्भ भएकाले र आगामी दिनमा थप छलफल गरेर अघि बढ्ने विषयमा दुबै नेता सहमत भएका छन् ।
शुक्रवार त्रिभुवन विमास्थलको आकासमा भएको त्यो घटना, ८ वटा जहाज आकासमा फनफनी
No Comments on शुक्रवार त्रिभुवन विमास्थलको आकासमा भएको त्यो घटना, ८ वटा जहाज आकासमा फनफनी
काठमाडौ । काठमाडौं स्थिति त्रिभुवन अन्र्तराष्ट्रिय विमानस्थलमा शुक्रवार फेरी अर्को घटना भएको छ । ४ वटा जहाज विमानस्थलको आकासमै फन फनी घुमेका छन् । केही दिन देखि अचानक बढेको चिसो र हुस्सुका कारण विमान अवतरण गर्न नसकेर आकासमा फनी फनी घुमेका छन् । खराब मौसमका कारण आकाशमै इन्धन सकिन लागेपछि ४ विमानलाई भारत र बंगलादेश डाइभर्ट गरिएको छ । यस्तै ४ विमान आकाशमै घुमीरहेका छन् ।
अवतरणको तयारीमा रहेका ८ अन्र्तराष्ट्रिय उडान पनि हुन सकेका छैनन् । बिहान ‘जिरो’ भिजिविलिटीका कारण त्रिभूवन अन्र्तराष्ट्रिय विमानस्थल बन्द भएको थियो । विमान स्थल खुल्ने आशामा विदेशबाट आएका ८ अन्र्तराष्ट्रिय उडानले काठमाडौं देखि सिमराको आकाशमाथि कैयौं पटक चक्कर लगाएका थिए ।
त्रिभुवन विमानस्थल स्रोतका अनुसार आकाशमा फन फनी घुमेका ४ बिमानको इन्धन सकिन लागेपछि ३ वटालाई बंगलादेशको ढाका एयरर्पोट एक विमानलाई कलकत्ता डाइभर्ट गरिएको छ । कुवेतबाट आएको जजिरा एयरका २ विमान र दमामबाट आएको हिमालयन एयरको १ विमानलाई ढाकामा अवतरण गरेका छन् भने फ्लाई दुवईको विमान कलकत्ता एयरपोर्ट गएको छ ।
यस्तै कतार एयरको एउटा विमान, हिमालयन एयरका दुई विमान, नेपाल एयरलाइन्सकाको एउटा विमान आकाशमा होल्डमा रहेका छन् । यी विमानले काठमाडौं र सिमराको आकाशमा चक्कर काटिरहेका छन् । विमानस्थल स्रोतका अनुसार यी विमानहरु दुबई र दोहाबाट काठमाठौं आएका हुन् ।
बिहानैदेखि लागेको बाक्लो हुस्सुका कारण विमानस्थलको भिजिविलिटी जिरो अवस्थामा पुगेका कारण आन्तरिक उडान पनि प्रभावित भएका छन् । विमानस्थल बन्द हुँदा आन्तरिक उडान हुन नसकेका हुन् । बिहान कुनैपनि आन्तरिक उडान नभएको र केही बेरपछि भरतपुर, भद्रपुर लगायतका स्थानका लागि उडान हुने जानकारी विमानस्थल स्रोतले जनाएको छ ।
रवीन्द्र मिश्रलाई पार्टी एकताको प्रस्ताव लिएर घरमै पुगे राजेन्द्र लिङ्देन, मिश्रले दिए यस्तो जवाफ
No Comments on रवीन्द्र मिश्रलाई पार्टी एकताको प्रस्ताव लिएर घरमै पुगे राजेन्द्र लिङ्देन, मिश्रले दिए यस्तो जवाफ
अमेरिकामा एक शिक्षिकाले जहाज चढेपछि कोरोना पोजेटिभ रिपोर्ट आउँदा सबै हैरान ,हैरान हुने जे गरिन् !
No Comments on अमेरिकामा एक शिक्षिकाले जहाज चढेपछि कोरोना पोजेटिभ रिपोर्ट आउँदा सबै हैरान ,हैरान हुने जे गरिन् !
USA corona positive teacher in flight
काठमाडौं । अमेरिकाकी एक स्कुल शिक्षिकाले उडानको बिचमा कोरोना पोजेटिभ भएपछि पाँच घण्टा हवाईजहाजको शौचालयमा सेल्फ आइसोलेसनमा बिताउनु पर्यो ।उनले आफ्नो स्वविवेकले त्यसो गर्ने निर्णय गरिन् । मारिसा फोसियोले डिसेम्बर २० मा शिकागोबाट आइसल्याण्डको उडानको क्रममा घाँटी दुखेको महसुस गरेकी थिइन् ।
उनीसँग र्‍यापिड टेस्ट किट थियो, त्यसैले उनले सोही क्रममा आफ्नो कोरोना परीक्षण गरेकी थिइन्, जुन पोजेटिभ भयो ।त्यसपछि उनले आफूलाई आइसोलेसनमा राख्ने निर्णय गरिन् र शौचालयमा बसेर बाँकी यात्रा पूरा गरिन् । त्यसै क्रममा विमान परिचारिकाले उनलाई खाना र पेय पदार्थ दिएको समाचार बाहिर आएको छ ।
मारिसाले भनिन्, ‘यो एक भयानक अनुभव थियो । उडानमा १५० जना थिए र मेरो सबैभन्दा ठूलो डर थियो कि उनीहरूलाई पनि संक्रमण हुन सक्छ ।’ मारिसाले आइसल्याण्ड एयरको विमानको शौचालयबाट टिकटकमा भिडियो पनि पोस्ट गरेकी छिन् ।त्यस क्रममा उनले सहयोग गर्ने एक चालक दलका सदस्यको प्रशंसा पनि गरेकी छिन् ।
उनले एनबीसीलाई भनिन्, ‘उनले मलाई पाँच घण्टामा चाहिएको कुरा पाएको सुनिश्चित गरे ।उनले बारम्बार मेरो स्वास्थ्यको बारेमा सोधिरहेका थिए ।’ मारिसाले आइसल्याण्डमा अवतरण गरेपछि रेडक्रस होटलमा आइसोलेसन गरिएको बताइन् ।